Horizon စျေး - အွန်လိုင်း HZ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Horizon (HZ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Horizon (HZ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Horizon ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Horizon တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Horizon များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
HorizonHZ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000226HorizonHZ သို့ ယူရိုEUR€0.000191HorizonHZ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000172HorizonHZ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000206HorizonHZ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00205HorizonHZ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00142HorizonHZ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00498HorizonHZ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000839HorizonHZ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000299HorizonHZ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000313HorizonHZ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00509HorizonHZ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00175HorizonHZ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00119HorizonHZ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0169HorizonHZ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0378HorizonHZ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000309HorizonHZ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000339HorizonHZ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00699HorizonHZ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00157HorizonHZ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0238HorizonHZ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.268HorizonHZ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0869HorizonHZ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0165HorizonHZ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00625
HorizonHZ သို့ BitcoinBTC0.00000002 HorizonHZ သို့ EthereumETH0.0000006 HorizonHZ သို့ LitecoinLTC0.000004 HorizonHZ သို့ DigitalCashDASH0.000003 HorizonHZ သို့ MoneroXMR0.000003 HorizonHZ သို့ NxtNXT0.0189 HorizonHZ သို့ Ethereum ClassicETC0.00003 HorizonHZ သို့ DogecoinDOGE0.0625 HorizonHZ သို့ ZCashZEC0.000003 HorizonHZ သို့ BitsharesBTS0.00877 HorizonHZ သို့ DigiByteDGB0.00855 HorizonHZ သို့ RippleXRP0.000757 HorizonHZ သို့ BitcoinDarkBTCD0.000008 HorizonHZ သို့ PeerCoinPPC0.000789 HorizonHZ သို့ CraigsCoinCRAIG0.105 HorizonHZ သို့ BitstakeXBS0.00985 HorizonHZ သို့ PayCoinXPY0.00403 HorizonHZ သို့ ProsperCoinPRC0.029 HorizonHZ သို့ YbCoinYBC0.0000001 HorizonHZ သို့ DarkKushDANK0.0741 HorizonHZ သို့ GiveCoinGIVE0.5 HorizonHZ သို့ KoboCoinKOBO0.0511 HorizonHZ သို့ DarkTokenDT0.000208 HorizonHZ သို့ CETUS CoinCETI0.667